LA OGAADAY: Qiimaha Ayna PSG Dhaafi Karin Ee Ay Barcelona & Real Madrid Ugu Qasban Yihiin Heshiiska Neymar Oo La Ogaaday. - Gool24.Net
LA OGAADAY: Qiimaha Ayna PSG Dhaafi Karin Ee Ay Barcelona & Real Madrid Ugu Qasban Yihiin Heshiiska Neymar Oo La Ogaaday.
Agaasimaha ciyaaraha kooxda Paris Saint-Germain ayaa shalay si rasmi ah u shaaciyay in meel heer sare ah uu marayo wada xaajoodka ay ku doonayaan in ay Neymar Jr ugu ogolaadaan in uu kooxdooda ka baxo balse waxa uu markaas cadeeyay in aan wali cidna heshiis lala gaadhin.
Laakiin waxaa la ogaaday qiimaha ugu yar ama ugu hooseeya ee ay kooxda Paris Saint-Germain kaga samri karto adeega xidiga reer Brazil ee Neymar Jr kaas oo qalbiga gashaday in uu xagaagan ka dhaqaaqo Paris.
Wargayska maalin laha ah ee dalka France ka soo baxa ee Le Parisien ayaa shaaciyay qiimaha ayna maamulka kooxda PSG wax ka hooseeya aqbali doonin haddii ay la doonayo in Neymar Jr lala wareego.
Wargayska Le Parisien oo si wayn ugu dhuun daloola wararka Neymar Jr iyo kooxdiisa PSG ayaa shaaciyay in dalab kasta oo ka hooseeya 200 milyan yuro in ayna kooxda PSG ka aqbali doonin kooxaha ku dagaalamaya saxiixa Neymar.
Haddii ay PSG sida uu wargayska Le Parisien sheegay ku adkaysato in ayna aqbali karin dalab ka hooseeya 200 milyan yuro, waxay arintani fursad wayn siinaysaa Real Madrid oo noqon doonta kooxda ugu cad cad ee Neymar la saxiixan karta.
“Mulkiilayaasha Qatar ee PSG waxaa ka cadhaysiiyay rabitaanka bixitaanka Neymar” ayaa lagu sheegay wargayska Le Parisien. Waxayna maamulka PSG doonayaa in haddii uu Neymar baxayo ay lacag badan badalkiisa ka dhigtaan.
Dhinaca kale isla wargayska dalka France ka soo baxa ee L’Equipe ayaa sheegay in Neymar Jr uu maamulka kooxdiisa PSG ka dalbaday in uu la kulmo Real Madrid intii aanu suuqa xagaagu furmin laakiin kulankaas ayaan suurtogal noqon.
Kadib fashilkii Real Madrid ka soo gaadhay Paul Pogba iyo Kylian Mbappe, waxa uu hadda madax wayne Florentino Perez uu doonayaa in uu Barcelona ka dul qaado saxiixa Neymar Jr kaas oo go’aan ku gaadhay in aanu Paris sii joogin.
Inkasta oo agaasimaha ciyaaraha kooxda PSG ee Leonardo aanu sheegin wax magac kooxdeed markii uu ka hadlayay in wada xaajoodyada bixitaanka Neymar meel heer fiican ah marayaan, haddana waxaa la fahansan yahay in Real Madrid iyo Barcelona yihiin labada kooxood ee sida dhabta ah ugu tartamaya xidigan.
Laakiin PSG ayaa doonaysa in ay Real Madrid ka caawiso sidii ay Barcelona ugaga hor mari lahaayeen saxiixa Neymar maadaama oo xidhiidhka Madrid iyo PSG uu aad uga fiican yahay kan u dhexeeya maamulada Barca iyo PSG.
SIDOO KALE AKHRISO: Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Maanta Oo Khamiis Ah Qoreen Wargeysyada Yurub
Si kastaba ha ahaatee, Real Madrid oo suuqa xagaagan ku bixisay in ka badan 300 milyan yuro ayay qasab ku noqon doontaa in ay ugu yaraan 200 milyan yuro kula soo saxiidaan Neymar Jr taas oo lacagta ay suuqa galiyeen ka dhigi karta half milyan yuro waana arin ayna sahlanayn in ay maamulka Bernabeu ku dhiiro karaan.
Laakiin haddii ay PSG ku adkaysato in Neymar Jr uu ku bixi karo ugu yaraan 200 milyan yuro oo ayna wax ciyaartoy ahi la socon, waxay markaas keenaysaa in Barcelona ayna heshiiskan gali karin sida ay xog laga helay Camp Nou muujinayso.